Jordania: Zo Fototry Ny Vehivavy Ho Amin’ny Fahamendrehana Sy Ny Fifamatorana Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2012 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, Italiano, Français, عربي, English
Tarihan'ilay hetsika malaza Ayna Naqef (Aiza Ho Aiza Isika Izao? fanentanana iray No Honor In Crime Tsy misy voninahitra anaty heloka bevava izany), ahitàna ny Jordaniana Ny Reniko Ary Zoko Ny Zom-pireneny, sy ny Mush Shatara (Tsy Milay Kosa Izany), ary ny Manohitra ny lalàna 308 amin'ny lalàna fanasaziana Jordaniana, ary koa ireo olon-tsotra mahaleotena voakasika amin'izany io fiaraha-miasa io.
Anatina naoty fandrindrana, nanoratra ny mpiahy ny hetsika, Toleen Touq, izay nanafàna ilay rojon'olombelona hoe :
Nitoraka bilaogy i Roba Al-Assi tao amin'ny AndFarAway:
Mamelà ahy hampatsiahy anao fa ato anatin'ny firenentsika, ny rafitra dia mamela an-kalalahana ny lehilahy iray hanolana izay zazavavy hitany eny an-dalana eny sy hanafina ny helony amin'ny fanambadiany azy avy eo.
Mamelà ahy hampatsiahy anao fa ato anatin'ny firenentsika, maherin'ny 112 ireo vehivavy Jordaniana maty novonoin'ny fianakaviany ihany tamin'ny fomba feno fahabibiana noho ny “voninahitra” tanatin'ireo 10 taona lasa. Mazava ho azy, mandefitra izany tsara ny lalàna famaizana aty amintsika.
Mamelà ahy hampatsiahy anao fa ato anatin'ny firenentsika, manavakavaka ny vehivavy ny lalàna, tsy rariny, ary mahihitra, noho izany dia tsy afaka mizaka ny zom-pireneko ireo zanako noho izaho vehivavy fotsiny ihany.
Mamelà ahy hampatsiahy anao fa ato anatin'ny firenentsika, amin'ny maha-vehivavy, misy fiantraikany amin'ny aintsika sy ny fananantsika ireo an-dalàna faha-97, 98, 100, 340, ary 345 ato anatin'ny firenentsika.
Miresaka momba ilay rojon'olombelona ao anatin'ity lahatsarin'ny AmmonNews ity (Ar) i Rozan Khalifeh avy amin'ny No Honor In Crime:
Antsipirihany bebe kokoa ao anatin'ity tatitra an-dahatsary avy amin'ny AlGhad TV (Ar) ity.
Topazo maso ireo sary sy teny faneva noraketin'i Roba ao amin'ny bilaoginy, ny rakitsarin'ny No Honor In Crime ary ny rakitsarin'ny bilagin'i Frekeeh eto.